Reeffi baqattoota 74 qarqara galaana Mediteraaniyaanii daangaa Liibiyaa irratti argame - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Reeffi baqattoota 74 qarqara galaana Mediteraaniyaanii daangaa Liibiyaa irratti argame
Reeffi baqattoota 74 qarqara galaana Mediteraaniyaanii daangaa Liibiyaa irratti argame
Reeffi baqattoota 74 qarqara galaana Mediteraaniyaanii daangaa Liibiyaa irratti argame. Eenyumaa namoota dhumanii kana ammatti addaan bafachuun akka hin danda’amne dubbatama. Hedduun baqattoota dhumanii lammiilee biyyoota Afrikaa addaddaa irraa dhufaniidha.
Baqattoonni ardii Afrikaa irraa gara Awurooppaa imaluudhaaf yaalii taasisan kuni kan dhuman sababaa dooniin isaanii dhidhimuutiin. Doonii baqattootaa balaa dhidhimuuf yeroo heddu kan saaxilu humnaa ol baqattoota baadhachuu fi haalli qilleensaa hammaachuu isaati.
Previous articleUK Gov handed out more than £1m of taxpayers’ cash to train up Ethiopian security officials
Next articleOromiyaa keessatti ajjeechaan, hidhaa fi doorsisaan babal’atee itti fufeera